လီဗာပူး ကစားသမားတစ်ဦးကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ အန်ဒီဂရေး နဲ့ လီဗာပူးရဲ့ weak link ကို အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဒီနေး - SPORTS MYANMAR
အန်ဒီဂရေးဟာ မနေ့ညက ဝက်ဖို့ဒ်ကို လီဗာပူး တို့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ နောက်ခံလူ ဒီဂျန်လော့ဗရန် ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ဝေဖန်ပြစ်တင် သွားခဲ့ပါတယ်။ ခရိုးအေးရှား နောက်ခံလူဟာ ပွဲမတိုင်မီ ဒဏ်ရာရ ခဲ့တဲ့ ဂျိုးဂိုးမက်ဇ် ရဲ့ နေရာမှာ အစားဝင် ကစားခွင့် ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဝက်ဖို့ဒ် အသင်းခေါင်းဆောင် ထရွိုင်ဒီနေး ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရပြီး လီဗာပူးတို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ အဖွင့်ဂိုးမှာ ၎င်းရဲ့ အပြစ် များစွာ ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စမိုင်လာဆား ၊ ဒီနေး တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဝက်ဖို့ဒ် ကတော့ ဒီရာသီမှာ လီဗာပူးကို ပထမဦးဆုံး အနိုင် ရတဲ့ အသင်း ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး အန်ဖီးကလပ် ကတော့ ၄၄ ပွဲဆက် ရှံုးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းနဲ့ ရပ်တန့် ခဲ့ရသလို ၊ မန်စီးတီးကို လိုက်မှီခဲ့တဲ့ ၁၈ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲ စံချိန် နဲ့ပဲ ကျေနပ် ခဲ့ရပါတယ်။ ဂရေး ကတော့ အဆိုပါ ပွဲအပြီးမှာ နောက်ခံလူ လော့ဗရန် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယခုလိုပဲ အကဲဖြတ်သွား ခဲ့ပါတယ်။
ဂရေး က “ဘောလုံးမှာ ဆိုးရိုးစကား တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အထောင် တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦးက ပြိုင်ဘက် ဗဟို နောက်ခံလူ တစ်ဦးကို အသာစီး ကစား သွားခဲ့တဲ့ အခါ ‘မင်းအရူး လုပ်ခံ လိုက်ရပြီ’ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီနေး ကလည်း ဒီနေ့မှာ လော့ဗရန် အပေါ် ဒီလို လုပ်ခဲ့ တာပါ။ လီဗာပူး တို့ ပေးဂိုး ၃ ဂိုး နဲ့ ရှံုးနိမ့် ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် တုန်းက ဗဟို နောက်ခံလူ အဖြစ် ကစား ခဲ့တဲ့ ဘယ်သူလဲ? ဒီဂျန်လော့ဗရန် ပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဝက်ဖို့ဒ် တိုက်စစ်မှုး ထရွိုင်ဒီနေး ကလည်း ဒီဂျန်လော့ဗရန် ကို လီဗာပူး ရဲ့ အားနည်းချက် ပစ်မှတ်ထား ကစား ခဲ့ခြင်းဟာ သူတို့ အသင်းရဲ့ နိုင်ပွဲ အတွက် အဓိက သော့ချက် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံ သွားပါတယ်။
ဒီနေးက “ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ဟာ ထိပ်တန်း နောက်ခံလူပါ။ သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထိပ်တန်း နောက်ခံလူ ၅ ဦးထဲက တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆီက တစ်စုံတစ်ရာ ရဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရပ်က ၆ ပေ ၆ လက်မ ရှိပြီး ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဗဟို နောက်ခံလူ ၂ ဦးထဲက ပိုမို အားနည်းတဲ့ သူကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်။ လော့ဗရန်ကို မလေးမစား ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
လော့ဗရန်ဟာ လကပစ် ပေးပို့မှုကို ကျွန်တော် နဲ့ အပြိုင် တိုက်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သူ့ကို ရှင်းထုတ်မှု မလုပ် နိုင်အောင် ကာထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ သူဟာ ဘောလုံးကိုတောင် မကြည့်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ fight ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီကနေ ဂိုးသွင်းယူ နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒါဟာ အကောင်းဆုံး အလုပ် ဖြစ်သွား ခဲ့ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဒီပွဲစဉ် မှာတော့ လော့ဗရန် တစ်ဦးတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လီဗာပူး ကစားသမား တော်တော်များများ ပုံမှန် ခြေစွမ်းအောက်ကို ရောက်နေခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှုး ၃ ဦးကလည်း ပြိုင်ဘက် ရဲ့ ခံစစ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်မှု အားနည်း ခဲ့ပြီး ရှေ့တန်းမှာ ဘောလုံးအပျက်များ နေတာကြောင့် ဘောလုံး လိုက်လံ ဆယ်ယူမှုတွေ ကနေ အသင်းဖော်တွေ အားအင် ကုန်စေ ခဲ့သလို ဝက်ဖို့ဒ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှု တိုးစေ ခဲ့ပါတယ်။
ကွင်းလယ်ပိုင်း ကလည်း တိုက်စစ်ကို ထိရောက်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေ မလုပ်ပေး နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ခံစစ်ကြောင်း ရှေ့ကနေလည်း ကာကွယ်မှုတွေ အားနည်းမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး full-backs တွေရဲ့ တိုက်စစ်မှာ ပံ့ပိုးမှုတွေ ၊ ခံစစ် ကစားပုံ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေချိန် မှာတော့ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ ယခုလိုပဲ ဂိုးပြတ် ရှံုးပွဲကို ဦးတည် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေး ကတော့ ပထမပိုင်း မှာ ကတည်းက လီဗာပူးကို အနိုင်ယူ နိုင်စွမ်း ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ တိုးလာ ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေးက “ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ပါ။ အားတွေ အများကြီး စိုက်ခဲ့ ရပါတယ်။ လီဗာပူးကို တစ်သင်းသင်းက အနိုင်ယူ နိုင်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကကော ဘာလို့ မဖြစ်နိုင် ရမှာလဲ? ကျွန်တော်တို့ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ရှံုးခဲတဲ့ အသင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ second balls တွေ ရအောင် လုပ်ပြီး သူတို့ကို ခက်ခဲ စေခဲ့ ပါတယ်။ ပထမပို်င်း အပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို အနိုင်ယူ နိုင်စွမ်း ရှိတယ် ဆိုတာ အားလုံး ယုံကြည်မှု ရခဲ့ကြ ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲတုန်းကလည်း ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမပိုင်းမှာ သူတို့ထက် ပိုကောင်း ခဲ့ပေမယ့် ပင်နယ်တီ ကနေ စပြီး ဂိုးပေးလိုက်ရကာ ရုန်းကန် ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ခံစစ်ကို စုစည်းစွာ ကစားပြီး တန်ပြန် တိုက်စစ်တွေနဲ့ သူတို့ကို ထိုးနှက် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ မြန်တဲ့ သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာတို့ ဒီနေ့ ဂိုးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။